Tag: ụdị | Martech Zone
Na-eto eto: Mee ka ọdịnaya gị na ROI dịkwuo mma na ọdịnaya mmekọrịta
Na Podcast na nso nso a na Marcus Sheridan, o kwuru banyere ụzọ ndị azụmaahịa na-efu akara na mgbe ha na-emepe mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha. You nwere ike ige ntị na ihe omume niile ebe a: Otu igodo nke ọ gwara okwu ka ndị ahịa na azụmaahịa na-aga n'ihu na-eduzi onwe ha na njem ndị ahịa ha bụ ọdịnaya mmekọrịta. Marcus kpọtụrụ aha ụdị ọdịnaya atọ nke na-eme ka ị na-eduzi onwe gị: nhazi oge - ikike maka atụmanya ịtọlite
Iji WordPress eme ihe dị ka sistemụ njikwa ọdịnaya gị mara mma n’oge anyị a. Ọtụtụ saịtị ndị a mara mma mana ha enweghị usoro ọ bụla maka ijide ahịa inbound. Ndị ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha, ọmụmụ ihe, na iji okwu zuru oke na-enweghị ike ijide ozi kọntaktị nke ndị folks na-ebudata ha. Developzụlite websaịtị na nbudata enwere ike nweta site na ụdị ndebanye aha dị mma. Site na ịchọta ozi kọntaktị ma ọ bụ
Sharpspring: Ahịa Azụmaahịa Dị Oké Ọnụ Ahịa na Ahịa Ahịa
Na Tọzdee, Septemba 22, 2020 Na Tọzdee, Septemba 22, 2020 Douglas Karr
SharpSpring na-ejikọ akpaaka azụmaahịa na CRM na otu njedebe njedebe njedebe emebere iji bulie azụmaahịa gị. Ihe ngosi ha bara ọgaranya nwere ihe niile ịchọrọ na ihe ndị ọzọ maka inbound sales & marketing automation: email dabere na omume, nyocha mkpọsa, peeji ọdịda dị ike, onye na-ewu blọgụ, usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ọgụgụ isi ọgụgụ isi, CRM & akpaaka ahịa, ụdị nrụpụta siri ike, ịkọ akụkọ na nchịkọta, ID onye ọbịa na-enweghị aha, na ndị ọzọ. Ndị SMB na ụlọ ọrụ Enterprise na-eji ikpo okwu ahụ, mana ndị ahịa kachasị nke SharpSpring bụ dijitalụ
Fieldboom: Fordị Smart, Nyocha, na Quizzes
Wenezdee, Jenụwarị 31, 2018 Douglas Karr
Ahịa maka ụdị ngwa eji arụsi ọrụ ike. Enweela ụlọ ọrụ dị iche iche na-ejigide mmepe ụdị ihe karịrị afọ iri na weebụ, mana teknụzụ ọhụụ na-enwekarị ahụmịhe ndị ọrụ, onyinye mgbagha dị mgbagwoju anya, na ọtụtụ njikọta. Ọ dị mma ịhụ ka ubi a na-aga n'ihu nke ukwuu. Otu onye ndu nọ n’ebe ahụ bụ Fieldboom, nke njirimara ya gunyere: Azịza ọkpọkọ - Gụnye azịza site na ajụjụ a gara aga dịka akụkụ nke ajụjụ ọhụrụ
Monday, September 11, 2017 Wednesday, September 13, 2017 Douglas Karr
Ahịa nke oge a bụ ahịa dijitalụ. Ogologo ya zuru oke na usoro inbound, usoro ndu na nurturing azum, na usoro ndụ ndị ahịa na njikarịcha mmemme. Iji nwee ihe ịga nke ọma, ndị ahịa chọrọ azịza ahịa ahịa dijitalụ nke nwere ike-ọgaranya, mgbanwe, mmekọrịta na sistemụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, kensinammuo, dị mfe iji, dị irè ma na-efu ọnụ. Ọzọkwa, pasent 90 nke azụmahịa n'ụwa niile pere mpe; otu a ka ndi ahia ha. Agbanyeghị, azaghị azịza akụrụngwa ahịa zuru oke iji gboo mkpa nke
Tingkwụsị Isi ọwụwa: Ihe kpatara Onlinedị Onlinentanetị Na-enyere Gị Aka asurelele ROI gị
Wenezdee, Machị 29, 2017 Wenezdee, Machị 29, 2017 Steve Hartert
Ndị nwere ego nwere ike ịlele ROI na ezigbo oge. Ha na-azụta ngwaahịa, ma na-elele ọnụ ahịa ngwaahịa ahụ n'oge ọ bụla, ha nwere ike ịmata ozugbo ma ọnụego ROI dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma. A sị na ọ dịịrị ndị ahịa ahụ mfe. Rtụ ROI bụ otu n'ime ọrụ kachasị mkpa n'ịzụ ahịa. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị siri ike anyị na-eche ihu kwa ụbọchị. Na data niile na-awụpụ
Akwụkwọ: Ngwa ngwa ngwa, kensinammuo, na ụdị ntanetị dị na ntanetị
Tọzdee, Disemba 6, 2016 Tọzdee, Disemba 6, 2016 Douglas Karr
Akwụkwọ ederede na-enyere onye ọ bụla aka ịmepụta ụdị ntanetị ma ọ bụ ibe ngwaahịa ngwa ngwa, na-enweghị nghọta, na ịkọwapụta ha dịka ọ masịrị ha - ha niile na-enweghị koodu ederede. Formsdị gị dị mfe maka ndị ahịa na obodo gị iji mezue na ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ ebe ọ bụ na ha na-anabata azịza. Akwụkwọ ederede gụnyere ike ibipụta ụdị na-akparaghị ókè, na-enye gị ohere itinye ha na saịtị gị, na-enyere gị aka ijikọ Stripe maka ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ tinye data gị site na Zapier. Nwere ike ịhọrọ nke gị